Miseensota Garee-hojii Ammaa
Yoordaanoos Tafarii, Itti-aantuu Dura-taa'aa Garee-hojii
Yoordaanoos Tafarii Abukaatoo eDiscovery muuxannoo waggoota 15 olii kan dhaabbata seeraa fi kubaaniyyoota Furtune 100 walmakate qabduu dha. Yeroo Yoordaanoos Tafarii Boordii Giddu-gala Hawaasaa Eritrea keessatti hojjachuu jalqabde, dalagaa dansaa Qindoomina Hawaasa Aadaa-hedduu (Multicultural Community Coalition) kan amma akka Dareektara Hojii-gaggeestuu yeroo dhafii taatee tajaajilaa jirtu tti wal barsiifamte. Yoordaanoos Boordii Gorsituu Kaka'uumsa Misooma Madaalawaa (EDI) fi Boordii Bulchiinsaa Hawaasota Hiree (COO) irrattis tajaajilaa jirti.
Yu Ann Youn, Itti-aantuu Dura-taa'aa Garee-hojii
Yu Ann Youn amma barattuu Gidu-gala Roobinsan Baratoota Darggaggoo tiif University of Washington digrii jalqabaa To'atiinsa Ijaarsaa tiin argachuuf dalagaa tan jirtuu dha. Mira gadi-fagoo qabdi waay'ee haqummaa sanyii ijaaruu fi industirii adda addaa Naannawaati Ijaarame keessatii akkasumas naannoo karoorfannaa fi misooma magaalaa irratti hirmaannaa ol'anaa hawaasaa wajjin akka ta'uuf dhadhesituu haxxee dha. Garee-hojii Haqummaa Geejjibaa tti kan makamteef mariiwwan naannoo karoofannaa geejjibaa keessatti sagaleewwan hawaasota BIPOC galii xiqaa fi dargaggoo ifatti as baasuf.
Rizwan Rizwi, Gargaaraa Dura-ta'aa Kabajaa
Rizwan Pirezidaantii fi CEO To'annaa Qabeenyaa SAR ti. England keessa Newcastle upon Tyne tti dhalatee guddate, To'annaa Daldalaa tiin kabajaan wajjiniin BA dhaan Newcastle University irraa akkasumas booda Bulchiinsa Daldalatiin MA dhan eebifame. Industirii investimantii keessatti muuxannoo baldhaa qaba akkasumas SMITH BARNEY Citigroup (amma qaama Morgan Stanley) tii Portfolio Haqummaa too'achuun waggoota dheeraa dabarse
2012 keessa, Rizwan Dareektara Hojii-Gaggeessa Tajaajilota Mannen Muslimaa (MHS) ta'ee iddoo bara 2018 keessa Kiing Kaawuntii guutuu keessatti namoota 1,100 oli mana akka argatan gargaaree, durummaan baqqattoota fi buqqa'oowwan mana dhabeeyyii ta'an. Garee-hojii Haqummaa Damee Geejjibaa Siyaatil tti makamee jira akka namoonni murteewwan geejjibaa keessatti sagalee qabaatan mirkaneessuf otumalleen gareewwan diinagdeen hubamoo ykn seenan bakka-bu'imma gadi aanaa qabaatan kan yeroo baay'ee saxaxa imaammataa keessatti irra utaalaman irraa dhufan ta'ullee.
Steven Sawyer, Gargaara Dura-ta'aa Kabajaa
Bishop Steven R. Sawyer falmaa mirgoota namoomaa, oogganaa hawaasaa, hojii uumaa, fi karaa-banaa amantii biyyoolessaa kan B.A. Bulchiinsa Daldalaa To'annaa Dhaabaa irratti xiyyeefate qabu akkasumas Maastars Barnoota Amantaa Misooma fi Haqa Aduunyaa irratti xiyyeefate Multnomah University Portland, OR kessa jiru irraa argatee dha. Ammatti Steven akka Dareektara Hojii-Gaggeessa POCAAN tti dalaga, duraan Neetworkii Uumatta Bifa Adii hin ta'in Farra AIDS jedhamee beekamu, ajansii tajaajila hawaassummaa aada-daneessaa hawaasota Siyaatil keessaa moggaatti baafaman erga 1987 tii tajaajilu. Ajansichi sagantaawwan haala badaan fayyadamuu qorsa sammuu nama adoochuu, hidhaa, mana maleessummaa, dhibeewwan walqunnamtii saalan darban, jibba sanyii irratti hundaa'e, jibba saala irratti hundaa'e, fi garaagarummaawwan moggaatti nama baasan biroo falmuu, barsiisuu fi sochoosu barbaadu dha. Dhaadannoo isaa kan dhaaba waliin qoodame: "Fayyaa, Hawaasa Warraaqsuu, fi Jireenya Jijjiiruu Jajjabeessuu.
An Huynh Qindeessituu Bakkee Uummataa fi Hawaasaa Seattle Chinatown International District Preservation and Development Authority (SCIDpda) tti dha. Naannawaa saxaxa aartii uummataa adda addaa, saxaxa paarkii, fi pirojeektiwwan hulaa fooyyessuu irratti waliigaltee barbaaduf daldaloota ollaa keessaa, jiraattota, fi abbaawwan qabeenyaa akkasumas dipaartiiwwan magaalaa, warreen maallaqa arjooman, fi dhaabbatoota saxaxaa waliin ta'uun hirmaannaa hawaasa fi qaqabiinsa pirojeektota bakkee uummataa Chinatown International District keessaa mijeessiti. An TEW tti kan makamte muuxannoowwan namoota Chinatown International District keessa jiranii kan maatiwwan %72 afaan Ingiliffaan ala ta'e haasawan fi %19.1 dulloomoo ta'an, lachuu yeroo baay'ee mariiwwan haqummaa geejjibaa irra alatti hafan, olkaasuf.
Cesar Garcia waggoota 17 darbaniif Siyaatil mana godhatee jira, bakke akka turjumaana affan Ispanishii fi riqicha haasawaa dirreewwan badhaa fayyaa, hawaassummaa, fi seeraa dabalatee ta'e dalagu. Bakkee karaa hasawaa mootummaa magaala fi hawaasa walakkaa qulqulleessun itti gargaaraa jiru Wal-qunnamsiisaa Hawaasaa dhuunfan Damee Ollootaa wajjin gara waggoota 5 tif dalagaa jira. Muuxannoowwan jireenyaa kumaatamootaa buqaatotaa fi baqattoota irratti dhiibbaa uuman ragaa ba'uudha kan isa haadha warraa isaa Peggy Hernandez Lake City Collective, kan dhimmoota bu'uura misoomaa fi jiraachuu danda'uu guddinaan maatiiwwan BIPOC fiixee kaaba Siyaatil keessa jiraatan dhiibuf dhaadhessu fi deebii kennu, hudeessurratti akka makamu qajeelche. Kibba, Giddu-gala fi Kaaba Siyaatil keessa jiraachun, Cesar investimantonni geejjibaa fi bu'uura misoomaa Magaalicha keessa al-walqixxummaa jiru muuxannoo ofiin arge qaba. Olloota bakkee maatiiwwan akka isaatii jiraatan keessa hacuuccaa akkanaa cabsuu fi nageenya foyyeessuu gargaaruf TEW tti makame.
Ellany Kayce miseensa gosaa galmoofte sablammii Tlingit, Gosa Raven dha. Ishiin Daarektara Hojii-gaggeesituu Sagantaa Dhalataa Nakani tti, 501c3 Siyaatil keessatti fi jireenya dalagaa ishii guututti akka barsiisaa fi misoomsituu sagantaa haqa sanyii fi hawaasummaa, gorsituu aadaa, karoorsituu taatee, qindeesituu, mijeesituu, leenjistuu, misoomsituu sagantaa baruumsaa fi maallaqa burqisiiftuu taateti dalagde. Ellany dabalataan muuxannoo umurii-guutuu Dhalataa Alaska, Dhalataa Ameerikaa, fi hawaasota Sablammiiwwan Jalqabaa wajjiin dalaguu qabdi, akkasumas leenjistuu, xabattuu dibbee aadaa, wallistuu, shubbistuu, fi dammaksituu hawaasati. Qaqabiinsi geejjibaa jireenyya guyyuu tif murteessaa akka ta'etti amanti, akkasumas dhabumman walqixxummaa fi haqa hawaassummaa geejjiba keessaa haala madaalawaa hin taanen warreen manamaleessummaan, jibbi sanyummaa, jibbi saala irratti hundaaye, fi jibba sadarkaa jireenyaa irratti hundaaye mudate dhiiba, akkasumas namoota seenan moggaatti bahan akka hojii, kunuunsa fayyaa, fi manneen gatiin madaalawaa hin qaqqabne dhoowwa. TEW dhaf Gosa Duwamish bakka buuti, bakkee itti barachuu fi Duwamish fir namoota Gosaa/Dhalataa Jalqabaa ta'an maraafuu tumsa ta'uuf abdatti.
Amir Noir Soulkin Tajaajilaaleen Hawaasa Baha Aafrikaa (EACS) tti Dareektara Qunnamtii fi Misoomaa ti, dhaabbata bu'aaf hin dalagne waggaa 21 Guraachan-durfamu-tajaajilu baqatoota fi maatiiwwan baqatootaa Baha Aafrikaa Kiing Kaawuntii keessa jiraataniin fi isaanumaaf kan uumame. Inni dhaabatichaaf nama jalqbaan qunnamanuu fi damee maallaqa burqisiisuu fi misooma dhabbatichaa kan to'atuu dha. EACS Siyaatil naannawa New Holly ti jira, kan irra baay'inaan hawaasa BIPOC ta'e waggaatti dargaggoo 350 oli karaa aadaa irratti hundaayen Olmaa da'immanii tii ka'ee anga kutaa 12ffaa tti gargaarsa baruumsan boodaa, bonaa, fi gidduu-seenuu fi sagantaawwan gorsaa kallattii jijjiirsisuu kan sagaleewwan maatiiwwan baqatoota fi buuqaattota Baha Aafrikaa ol kaasu tajaajilu dha.
Amir Puget Sound Sage's Community Leadership Institute irraa eebifame bakkee beekkumsa cimaa walitti hidhannoo sochii kutaa fi qaqabiinsa geejjiba nagaa qabeessa, gatiin madaalawaa, walqixa kan haala jireenyaa hunda wal qabsiisu walakaa jiru. Baqattonni guraachaa yeroo baay'ee haasaawwan imaammataa irraa alatti hafu sababa afaaniitii fi/ykn gufuuwwan qaqabiinsatiif kun waan namoota hawaasaa karaa hirmaannaa dimokraatawaa bocamee keessaa jirataniif haalan hamaa ta'edha. Amir Garee-hojii Haqummaa Geejjibaa irratti tajaajilun akka bakka hawaasota baqatoota fi buuqaattota Baha Aafrikaa bakka bu'uun dalagaa barbaachisaa fi dhiibbaa qabeessa irratti himaachuu danda'utti itti dhaga'ama: "Bakka-bu'aa qabaachun gatii qaba. Tokkumman BIPOC Gatii Qaba. Lubbuun Guraachaa Gatii Qaba. Sagaleewwan Guraachaa gatii qabu. Fedhiiwwan Guraachaa gatii qabu. Dinaagdeen Guraachaa gatii qaba. Qulqullinni jireenya Guraachaa gatii qaba."
Karia Wong erga 1998 tii baqattoota tajaajilaa jirti, jalqaba akka tola-baatutti akkasumas amma Giddu-gala Odeeffanno fi Tajaajila Chaayiniizi (CISC) tti akka Qindeessituu Giddu-gala Qabeenya Maatii tti tajaajila jirti. Waggoota 20+ baqatoota gargaaraa turtetti, Karian akkamitti baqatootaf walqixxummaa dhabuun geejjibaa jireenya isaanii haaraa Siyatil keessatiif gufuu ta'e argite. Namni martuu biyyi irraa dhufan, afaan, dubduubee fi dandeettiiwwan qaamaa/sammuu isaanii otoo ulaagaa keessa hin galin filannoowwan geejjibaa nagaa qabeessa, gatii madaalawaa, qaqabamaa fi haala naannawaatif bubbuluu kan danda'u qaqabiinsa walqixa ta'e qabaachu qabu jetteeti amanti.
Miseensota TEW duraanii
Sokunthea Ok (Qajeelcha Ollaawwanii (DON), Wal-qunnamisiiftuu Hawaasaa)
Analia Bertoni (Qajeelcha Ollaawwanii (DON), Wal-qunnamisiiftuu Hawaasaa)
Qooda fudhachuu barbaadda?
Iyyannoowwan Garee-hojii Walqixxummaa Geejjibaa tiif amma cufamee jira. Fedhii keessaniif galatoomaa! Hireewwan fulduraatif maaloo booda deebi'aa laalaa.